ဗီဒီယိုကဒ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ? AMD Radeon HD 7480D အားနည်းဂရပ်ဖစ်ကဒ်ဂရပ်ဖစ်ကဒ် AMD Radeon HD အားနည်းဂရပ်ဖစ်ကဒ် 7480d ။ ၏သင်တန်းပြုလုပ်မှသာအင်တာနက်ကိုရယူရန်, ဂိမ်းများများအတွက်မဟုတ်ပါနှင့် ...
အဆိုပါလက်တော့တစ်မိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက် connector ကိုမရှိပါဘူး, ငါသည် nooutbuk အတူတူဝါယာကြိုးများနှင့်နားကြပ်နှင့်ငါ့အပေါ်မိုက်ခရိုဖုန်းအတွက်နားကြပ်ဆိုလိုသည်မှာများအတွက် connector ကိုရှိစေခြင်းငှါကိုမဆိုတစ်ဦး Laptop ကို Lenovo ကတို ...
ကျွန်ုပ်သည် Windows 8 မှ F8 မှတဆင့် Safe Mode သို့ ဝင်၍ မရပါ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ + F8 ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။ “ Windows Startup Options” ဖန်သားပြင် (ယခင်က“ Advanced Boot Options”) ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Windows တွင်သင်စတင်နိုင်သည်။
ငါ2ဗီဒီယိုအားထားနိုင်သလား? သငျသညျဂရပ်ဖစ်ကတ်များများအတွက် slot နှစ်ခု 2, လောင်း, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကဲ့သို့တူညီသောကဒ်ကိုရှာဖွေနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, ထိုကဒ်များ၏အဓိကဖွဲ့စည်းမှုအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည် ...
built-in စီမံအုပ်ချုပ်သူကိုအကောင့်ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ကြိုးစားပါ-in ကိုသင်ပထမဦးဆုံးအဖွင့်ဖို့လိုတယ်, အအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအကောင့်ထဲသို့ log နိုင်ပါတယ်။ Run command ကိုအတွက် cmd ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦး command prompt ကိုစတင်ပါ။ ထဲမှာ ...
15000 ရူဘယ်များအတွက်ဂိမ်းကစားကွန်ပျူတာတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်လို Prompt ။ ငွေကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်သင်အလတ်စား settings ကိုမှာဂိမ်းအများစုဆွဲထုတ်တံ့သောစျေးကြီးသည့်စနစ်စုဆောင်းလို့မရပါဘူး။ မူရင်းလျှင်အလုံအလောက် ...
GeForce GTX 660M အစွမ်းထက်အလုံအလောက်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်? ငါ Beech အပေါ်တူညီတဲ့ရှိသည်။ 1: 1 ပုံမှန်ကွန်ပျူတာကဲ့သို့အအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ FPS ဂိမ်းထဲမှာပြောင်းလဲသွားတယ်မထားပါဘူး။ မြေပုံအတော်လေးအစွမ်းထက်ပေမယ့်ပိုပြီးဖြစ်ပါတယ် ...
cooler ကို power supply မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်မည်သည့် cooler ကိုမဆိုဖြတ်ထုတ်ယူပါ။ ၎င်းသည် connector ကိုဖြတ်တောက်ပါ။ သင် 100% အလုပ်လုပ်လိုပါက plug ကို connectorbသို့ထည့်ပါ။ - အနက်ရောင်မှအနက်ရောင်သို့ ...
Netbook ဘရိတ် - ဘာလုပ်ရမှန်း ???
Netbook ဘရိတ် - ဘာလုပ်ရမှန်း ??? ပထမတစ်ခုမှာ Laptop ကို CCleaner ဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်း၊ ကွန်ပျူတာတွင်မလိုအပ်သော startup များကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်တတိယမြောက်ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ Dr.Web ကုထုံး Dr.Web CureIt! ပြတင်းပေါက်များပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ
ဘယ်မှာဗီဒီယိုကဒ်များအတွက် pin ကိုရဖို့ 8 ပြုပြင်မွမ်းမံ?2pin ကိုအပေါ်တစ်ဦး molex adapter (x8) လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ခြောက်လတံသင်နှင့်အတူ razm လွတ်လပ်စွာ 8 E-pin ကို socket သို့ဝင်သောလျှင်အလုပ်မလုပ်မည်ဟု plug နှင့်ပါစေ ...
video card! အဆိုပါ Nvidia GeForce GT620 2GB ကဒ်တစ်နှစ် 2012 ဂိမ်းအကောင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုပြောပြ? Ahhahahaahaha, သင် asasin မြင့်မားသော 100% ပေါက်ကွဲထွက်ရာမှကောင်းစွာရဲ့ကဒ်ကိုသင်ကောင်းမကောင်းကြောင်းပြောပါရစေ ...
ဘယ်မှာအမှုပရိတ်သတ်တွေချိတ်ဆက်ဖို့? အဆိုပါ Motherboard နဲ့ပန်ကာ connector ကိုသင်တက်ခူးခံရဖို့ခွင့်ပြုမိလျှင်, အထက်ဖြေဆိုကြည့်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် 1,2- razmy coolers ချိတ်ဆက်ဖို့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးယူနစ်ချိတ်ဆက်ရန်။ အဆိုပါ CPU ကိုများအတွက် 3- razm ...
ပြတင်းပေါက်များက“ chkdsk c: /f/ r” ထက်ပိုမှန်ကန်သော hard disk ပြproblemနာကိုရှာဖွေပြီး၎င်းကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ နောက်တဖန် ထပ်မံ၍ အဆင့်နည်းသည့်ချို့ယွင်းမှုပုံစံချခြင်းများရှိလိမ့်မည် (mhdd ကိုကျွန်ုပ်အများဆုံးနှစ်သက်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် ...
core2ကို Quad Q8300 ။ သငျသညျဂိမ်းတစ်ခု Processor ကိုမဝယ်သင့်သလော သာမန် processor ကို။ ဂိမ်းများကိုကောင်းစွာ Windows ကို7အတွက် quad များအတွက် optimized နေကြသည်။ ဒါပေမယ့် Windows XP မှာအများကြီးပိုဆိုးသည်။ ပိုကောင်းမယ့်ယူ ...
ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုကဒ်၏ယာဉ်မောင်းဗားရှင်းကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ။ Control Panel - System - Equipment - Device Manager - ဗွီဒီယို Adapters (၂ ကြိမ်နှိပ်ပါ) - rest ၀ ရတ်တောင်တက်ရန်ဒရိုင်ဘာကိုဒေါင်းလုဒ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ (EVEREST Ultimate Edition ...
Dell laptop များနှင့် ပတ်သက်. သင့်သုံးသပ်ချက်များဒဲလ်ဟာအလွန်မြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကိုသံထံမှ ASUS ကလက်ပ်တော့ယူမဟုတ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အဒဲလ်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုအခြားလက်တော့အမှတ်တံဆိပ်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့် သာ. ကောင်း၏။ ဥပမာအားဖြင့် ...
ဗီဒီယိုကဒ် Nvidia GeForce GT ကို 440 လျှင်ကောင်းသော? NVIDIA GeForce GT 440 ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းအတွက်အသုံးပြုသူများအမကြုံစဖူးသရုပ်မှန်နှင့်ဇာတ်ကောင်အတွက်အသေးစိတ်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အဆင့်ရှုခင်းများနှင့်ဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်မှာပေးသည် ...
ဘာဂဏန်းတွက်စက်မှားသွားနိုင်ပါတယ်? ကိုမီးရှို့သော့ချက်များ kvarets ကျဆင်းအဟောင်းကိုပစ္စည်းကိရိယာများကိုချွတ်ရေးလိုက်ဖို့ဂဏန်းတွက်စက်အချို့လေးနက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလိုအပ်ပါတယ်အက်ဘုတ်အဖွဲ့, ဘက်ထရီ, oxide ဘုတ်အဖွဲ့ဆင်းပြေးဖန်သားပြင်အက်။ Rassokha နှင့်အက် ...
လက်ပ်တော့များတွင်ဗီဒီယိုကဒ်အဘယ်မှာရှိသနည်း အထဲမှာဓာတ်ပုံ။ ငါ upgrade ချင်တယ်။ တစ်ထောင့်၌၎င်း, အရာဘက်သနည်း အထီးကျန် Vanilla ထမ်းရွက်, သင်ကဗီဒီယို chip ကိုအဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့မှရှိတာပါကြောင်းပြောနေကြပါသည် ...
“ ဂရပ်ဖစ် controller အမျိုးအစား - discrete နှင့် built-in” ဆိုသည်မှာဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ "ဂရပ်ဖစ် Controller အမျိုးအစား - သီးခြားစီနှင့်ပေါင်းစည်းထားသည့်" Built-in - Motherboard တွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ Discrete ဂရပ်ဖစ်ကဒ်။ ငါ beech နှင့်ဘက်ပေါင်းစုံဗီဒီယိုကဒ်လည်း ၀ ယ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကပေါင်းစည်းထားတယ်၊ built-in၊